Biofit ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - Come4Buy eShop
ကောင်းမွန်သော အစာခြေလမ်းကြောင်း ကျန်းမာခြင်း၏ ဆက်စပ်မှုကို လွန်စွာ အလေးထား၍ မရပါ။
The Guardian ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အစာခြေလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးသည် မည်မျှအရေးကြီးသည်ကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည့် ဆောင်းပါးတိုလေးတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ (ဆောင်းပါးတိုကို ဤနေရာတွင် သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ https://www.theguardian.com/society/2021/jul/11/unlocking-the-gut-microbiome-and-its-massive-significance-to-our-health).
ဆေးဝါးများသည် ရောဂါလက္ခဏာများကို ဖြေရှင်းနိုင်သော်လည်း အစာခြေလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်၊ ကင်မ်ချီ၊ အရိုးပြုတ်၊ ဒိန်ချဉ်စသည့် အစားအစာများစွာကို စားသုံးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ ခက်ခဲသောအမှန်တရားဖြစ်သည်- ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အူအတွင်းရှိ သစ်ပင်ပန်းမန်များ ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် အစားအစာများကို စားသုံးရန် အဆက်မပြတ်စဉ်းစားရန် အချိန်မရှိပေ။
အရိုးချက်နည်း? မင်းအတွက် ဘယ်သူလုပ်ပေးမှာလဲ။ အရိုးထုတ်နေတာ နာရီပေါင်းများစွာ ထိုင်နေသလား။
အစစ်အမှန်ဖြစ်ခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းလမ်းကို ရှောင်ရန်မှာ ခက်ခဲပါသည်။
ဝိတ်ကျဖို့ကြိုးစားရင် ပိုခက်ပါတယ်။ သင့်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကို စောင့်ကြည့်ရုံသာမက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လည်း လိုအပ်ရုံသာမက သင့်တွင် အခြားသော လှူဒါန်းမှုများလည်း ရှိပါသေးသည်။
အလွန်အားစိုက်ထုတ်မှု လိုအပ်သောကြောင့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် 'မင်း၏အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း လျှော့ချခြင်း' မြင်ကွင်းတွင် ပေါက်ပြဲသွားကာ လူကြိုက်များလာသည်...
၎င်းကို Biofit ဟုခေါ်ပြီး နေ့စဉ် ပုလင်းထောင်ပေါင်းများစွာ ပေးဆောင်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသော တက်ဘလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ များသောအားဖြင့် သံသယရှိသော်လည်း၊ ဤပစ္စည်းသည် လဆုတ်ခြင်း၏ ညွှန်ပြခြင်းမရှိသည့် ကြီးမားသောဆွဲဆောင်မှုကို အမှန်တကယ်တွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်း ငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။
လုပ်ဆောင်ရန် အတည်ပြုထားသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုမျှသာ မတည်ငြိမ်သော ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချသည့် စျေးကွက်တွင် ကြာရှည်စွာ ရပ်တည်နိုင်သည်။
1) Biofit သည် အစာခြေလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေသည့် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ သတ်မှတ်ပေးသည်။ ဒါက သူ့ရဲ့ မာကျောမှုပါ။ သင့်အစာခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် သင်သည် အစာစုပ်ယူမှုကို ပိုကောင်းစေကာ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်း လျော့နည်းစေသည့်အပြင် ရောင်ရမ်းမှုကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်သည့်အပြင် စွမ်းအားလည်း ပိုမိုရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်၊ Biofit သည် သင်၏အစာခြေခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးပြီး ၎င်းသည် ကြီးမားသောအရာဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ပိန်ဖို့မကြိုးစားရင်တောင် သင့်အစာခြေလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးဖို့အတွက် Biofit ကို အသုံးချနိုင်ပါသေးတယ်။
2) Biofit ဆေးတစ်လုံးစီတွင် probiotics ၏ ဖိစီးမှု7ခု ရှိပါသည်။
က) Bacillus subtilis ။
ခ) အဏုဇီဝ lactis ။
ဂ) Bifidobacterium breve။
ဃ) Bifidobacterium longum။
င) Lactobacillus Plantarum။
f) Lactobacillus acidophilus။
မျိုးစိတ်တစ်ခုစီနှင့်ပတ်သက်သော နက်နဲသောအချက်အလက်ကို သိရှိထားခြင်းဖြင့် သင့်ဘောင်းဘီကို မွေးဖွားရန် တောင်းဆိုခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ဤ probiotic ဖိအားများသည် သင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့ကျစေမည်၊ သင်၏ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးမည်၊ အစာချေဖျက်မှုကို ကောင်းမွန်စေကာ၊ lactose သည်းမခံနိုင်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် သင့်ကျန်းမာရေးကို ယေဘုယျအားဖြင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမည် ဖြစ်သည်။ .
3) Biofit သည် သင့်အား ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ် ရောင်လာသောအခါ၊ သင့်ဆဲလ်များသည် သင်၏ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရန် အားထုတ်မှုတွင် စွမ်းဆောင်ရည် လျော့နည်းလာမည်မှာ သေချာပါသည်။ Biofit တွင်ရှိသော ပရိုဘိုင်အိုတစ်များသည် ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် ယခု သင် ကယ်လိုရီ ပြတ်လပ်နေချိန်တွင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်သည့်အပြင် ကိုယ်အလေးချိန်လည်း တိုးလာပါသည်။
ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် Biofit သည် အကောင်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန်အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ပေးသည်။ လူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် အလေးချိန်မကျသွားမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်သည့် ရှုပ်ထွေးသောသေးငယ်သောဇီဝရုပ်များဖြစ်ကြောင်းကို လူအတော်များများက မသိကြပေ။
ထို့ကြောင့် များပြားလှသော ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြဆရာများသည် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းအစီအစဉ်မစတင်မီ ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား detox လုပ်ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ Biofit သည် နှိုင်းယှဥ်သဘောဖြင့် ပြုမူသည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိပ်ဆုံးမှရရှိစေသည်။
4) အမြန်မေးခွန်း-- သင်သည် Biofit အကြောင်း ခြံစည်းရိုးတွင်ရှိနေပါက၊ ၎င်းကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ6လအထိ စမ်းသုံးကြည့်လိုပါသလား။ လူတော်တော်များများက “Yes!
ကောင်းပြီ၊ အဘယ့်ကြောင့်ထင်သနည်း။ Biofit တွင် ရက်ပေါင်း 180 ငွေပြန်အမ်းရန် အာမခံချက်ပါရှိသည်။
အဲဒါက အထင်ကြီးစရာပဲ… အပြင် မင်းရဲ့ပြည်တွင်း GNC ဆိုင်မှာ မင်းတွေ့ရမယ့် အရာမဟုတ်ဘူး။ Biofit မှလူများသည် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်၏ ထိရောက်မှုကို စစ်မှန်စွာ ယုံကြည်အားကိုးကြသည်။
သင် ၎င်းကို6လကြာ စမ်းသုံးနိုင်ပြီး သင့်အတွက် သင့်လျော်မှုရှိမရှိ ကြည့်ရှုပါ။ သင့်မိသားစုဝင်များအတွက် Biofit ကွန်တိန်နာများ ထပ်မံဝယ်ယူရုံဖြင့် ၎င်းသည် မည်မျှအစွမ်းထက်သည်ကို သင်အံ့သြမိပေမည်။
5) Biofit ကိုစားသုံးရန်လွယ်ကူသည်။ တစ်နေ့ကို တစ်လုံးလောက် သောက်ရုံပါပဲ။ ရောစပ်ခြင်းမရှိပါ။ ရေနှင့်မရောစပ်ပါ။ ဖျော်ရည်မရှိပါ။ ကတိသစ္စာပြုခြင်း မရှိပါ။
ဆေးပြားတစ်ပြားကို ရေတစ်ခွက်နဲ့... ဒီ့ထက်တော့ မရှုပ်ထွေးပါဘူး။
6) Biofit သည် vegan ဖော်မြူလာတစ်ခုဖြစ်ပြီး gluten-free ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ ဒီမှာ ကြောက်စရာမရှိပါဘူး။
7) Biofit သောက်သုံးခြင်းမှ နေမကောင်းသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အကြောင်းကို အစီရင်ခံခြင်း မရှိသေးပါ။ ၎င်းသည် အမျိုးမျိုးသော အခြားကိုယ်အလေးချိန်တက်ဘလက်များနှင့်အတူ သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည်ထက် များစွာသာလွန်ပါသည်။
8) Biofit သည် 2-in-1 ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ကိုယ်အလေးချိန် စီမံခန့်ခွဲရေးပစ္စည်းအဖြစ် စျေးကွက်တင်ရောင်းချနေချိန်တွင် (ပိုမိုရောင်းချရနိုင်သည်)၊ လက်တွေ့မှာ ၎င်းသည် 'ကျန်းမာရေး' ဖြစ်သည် ။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းခြင်းသည် အကျိုးကျေးဇူးများထဲမှ တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ကျန်းမာတဲ့ အူလမ်းကြောင်းရှိဖို့က အလုံးစုံကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ Biofit သည် သင့်အား ... ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဆာလောင်မှုကို လျှော့ချရန်သာ အာရုံစိုက်သည့် အဆီလောင်ကျွမ်းစေသော တက်ဘလက်အများစုနှင့် မတူဘဲ သင့်အား ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
သင့်ဒေါ်လာစျေးပိုရလိုပါက Biofit ကိုရယူပါ။ အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပြီး ပိန်လှီသော ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။ နောက်ထပ် ဘာအများကြီး တောင်းဆိုနိုင်မလဲ။
9) ပို့ဆောင်မှုမြန်ဆန်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် US တွင်နေထိုင်ပါက၊ သင်၏ Biofit ကွန်တိန်နာများကို 3-7 ရက်ခန့်အတွင်း ရရှိရန် မျှော်မှန်းနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အော်ဒါမှာယူမှု 10-14 ရက်ခန့် ကြာပါသည်။
10) ပစ္စည်းသည် အရောင်းရဆုံးဖြစ်သလို လူတစ်ဦးချင်းထံမှ ကောင်းမွန်သော သုံးသပ်ချက်လည်းရှိသည်။ Biofit သည် ၎င်းအလိုရှိသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြောင်း လူမှုရေးဆိုင်ရာ သက်သေပြရုံသာမက၊ ၎င်းသည် စျေးကွက်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို ပေးဆောင်ကြောင်း ညွှန်ပြနေပြီး နောက်ဆုံးတွင် ယင်းသည် ပြဿနာများဖြစ်သည်။
1) အရောင်းဝဘ်စာမျက်နှာသည် အချက်အလက်များကို အလွန်အကျွံမချိုးဖျက်သည့်အပြင် အရောင်းဗီဒီယိုအပိုင်းကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သို့သော်လည်း ပစ္စည်းသည် အရောင်းရဆုံးဖြစ်သလို အပြုသဘောဆောင်သော ထောက်ခံချက်များလည်းရှိသည်။ ဒီတော့ အလုပ်ဖြစ်မယ်။
2) Biofit တစ်ပုလင်းကို $69 (ပို့ပေးသည်)။ Lean Mode သို့မဟုတ် Hydroxycut ကဲ့သို့သော အခြားသော ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချသည့် ဖြည့်စွက်စာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းသည် အနည်းငယ် ဈေးကြီးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ3ထုပ်ကို မှာယူပါက ကုန်ကျစရိတ်မှာ ကွန်တိန်နာတစ်ခုလျှင် $59 သို့ ကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး6containers ဝယ်ယူပါက တစ်ပုလင်းလျှင် $49 သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အလွန်သိသာထင်ရှားသောရလဒ်များကိုမြင်ရန် အနည်းဆုံး ရက်3အနည်းဆုံးအသုံးပြုရန် လိုအပ်သောကြောင့် 90-pack ကိုမှာယူခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ Biofit သည် သင့်အတွက် အလုပ်မဖြစ်ပါက ငွေပြန်အမ်းပေးမည့် အာမခံသည် သင့်အား အကျုံးဝင်ပါသည်။
3) အရောင်းဗီဒီယိုကလစ်က လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ ရလဒ်တွေရနိုင်တယ်လို့ ပြောနေပေမယ့် အဲဒါက ရိုးရိုးကြော်ငြာနဲ့ မားကတ်တင်းပါပဲ။ ပုလင်းတစ်လုံးမှာ ဘယ်တက်ဘလက်မှ မပေးနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကနေ အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့နဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင်းကျန်းမာစေဖို့ စိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုရင် Biofit မှာ သင့်နာမည်ကို ဖန်တီးထားပါတယ်။ ကြိုးစားရကျိုးနပ်မှာသေချာပါတယ်။
ရက်ပေါင်း 180 ငွေပြန်အမ်းပေးသည့် အာမခံဖြင့်၊ သင်၏အဆုံးတွင် အန္တရာယ်မရှိပါ-- ရရှိရန် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။
အချို့သောကိစ္စများတွင်၊ တင်းကြပ်သော အစားအသောက်အစီအစဉ်နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ အသက်အရွယ်ရလာသောအခါ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည်ဟု ခံစားရပေမည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ ဒါက မင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းစနစ်သည် ထပ်တူမကျပါ။ သင့်အစာခြေလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးသည် တာရှည်ခံနိုင်သည်၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင် ရောင်ရမ်းနေနိုင်သည် သို့မဟုတ် အရေးကြီးသောအာဟာရများမရရှိတော့ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီပြဿနာတွေကို သင်ဖြေရှင်းလိုက်တာနဲ့ သင့်အဆီလောင်ကျွမ်းမှု အစပျိုးမှုက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာမှာလား။
Biofit က ဤပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။ ၎င်းကို စမ်းကြည့်ခြင်းဖြင့် သင့်အတွင်းပိုင်းကျန်းမာသန်စွမ်းမှုကို ပြန်လည်ရရှိပြီးသည်နှင့် သင့်ကိုယ်တွင်းကျန်းမာမှုကို ပြန်လည်ရရှိလာသောအခါတွင် ဆက်တိုက်ပိုနေသောပေါင်များကို မည်မျှမြန်မြန်ကျစေသည်ကို သင်အံ့သြသွားနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ သင်အတွင်းပိုင်းကို ထူးထူးခြားခြားခံစားရပြီး အပြင်မှာလည်း အံ့သြစရာကောင်းတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဒီ့ထက်တော့ မတိုးတက်ဘူး။
>>> ယခု "Biofit" ကိုရယူပါ။ <<
ပရိုမိုးရှင်းများ၊ ထုတ်ကုန်အပ်ဒိတ်များနှင့် အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းချက်များ။ သင့်ဝင်စာပုံးသို့ တိုက်ရိုက်
ဖောင်ကို တင်ပြရန် မအောင်မြင်ပါ။ ထပ်စမ်းကြည့်ပါ။
10% OFF ရရှိပါမည်။
ဤကူပွန်ကို သင့်ငွေရှင်းသည့်စာမျက်နှာတွင် ထည့်ပါ။